မီးလောင်နေ တဲ့ တိုက် ခန်း ကေ န မိ ဘေ တွ ကို ကယ် တင် ဖို့ ကိုယ့် ကို စတေး ခဲ့ တဲ့ သတင်းကြေငြာသူလေး – Shwe Wiki News
Homepage / Local News / မီးလောင်နေ တဲ့ တိုက် ခန်း ကေ န မိ ဘေ တွ ကို ကယ် တင် ဖို့ ကိုယ့် ကို စတေး ခဲ့ တဲ့ သတင်းကြေငြာသူလေး
မီးလောင်နေ တဲ့ တိုက် ခန်း ကေ န မိ ဘေ တွ ကို ကယ် တင် ဖို့ ကိုယ့် ကို စတေး ခဲ့ တဲ့ သတင်းကြေငြာသူလေး
မီးေ လာင်နေတဲ့တိုက်ခန်းကနေ မိဘတွေကိုကယ်တင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုစတေးခဲ့တဲ့ သတင်းကြေငြာသူလေးပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ 7ရက်နေ့ ၊ မနက်ခင်း 4နာရီအချိန်လောက်က Zeng Yingxin အမည်ရှိတဲ့ ဟောင်ကောင် သတင်းကြေညာသူလေးဟာ မီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တိုက်ခန်းကနေမိဘတွေကို ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားရင်း အသက်သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် …. ။ သူမဟာ အသက် 26နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပြီး ၊ သူမရဲ့ ချိုသာပြီးလှပလွန်းတဲ့အပြုံးတွေ နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေကြောင့် လူသိများကျော်ကြားပြီး TV programတွေ မှာအမြဲလိုလိုပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါ တယ် ။
အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့က သူမတို့နေထိုင်ရာ 9လွှာရှိတိုက်ခန်းအထိ မီးများကူးစက်လာခဲ့၍ အဆိုပါနေရာသို့မီးသတ်သမားများက 5မိနစ်အတွင်း ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပေမဲ့ မီးတွေကအတော်လေးကိုအရှိန်ပြင်းနေခဲ့ပါပြီ …. ။ အစပိုင်းမှာ Zeng ဟာ လွတ်မြောက်နေပြီဆိုပေမဲ့လည်း အိပ်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ မိဘတွေကိုအရင်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ သူမဦးစားပေးကြိုးစားခဲ့ပါတယ် …. ။
မီးသတ်သမားတွေ သူမတို့ရဲ့တိုက်ခန်းအနားသို့ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ သူမရဲ့မိဘများကိုသာ ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ် … ။ နောက်တစ်ကြိမ် Zeng ကိုပြန်သွားကယ်ထုတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ချိန်မှာတော့ သူမကိုအခန်းထဲမှာ မီးလောင်ကျွမ်းပြီးအသက်မဲ့နေခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့ပါ တယ် …. ။
ထို့အပြင် သူမရဲ့မိဘများက မီးခိုငွေ့တွေများစွာ ရှုရှိုက်မိပြီး ၊ ပွန့်ပဲ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ဆေးကုသမှုခံယုနေခဲ့ကြပေမဲ့ လည်း သမီးလိမ္မာလေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက် အတော်လေးကိုရူးကြုံမရဖြစ်နေပြီး ခံစားနေရလျက်ရှိပါတယ် …. ။ အဆိုပါ မီလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုတော့ ရဲအရာရှိများက ဆက်လက်စုံစမ်းလျက်ရှိပါတယ် …. ။ ထို့အပြင် Zeng ဟာ သူမရဲ့ ဂျူ နီယာတွေ ၊ ပြည်သူတွေ အတော်လေးကိုချစ်ခင်အားကျရတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် …. ။Jasmine (Mckzone Daily)
Previous post အမြန် လမ်းမပေါ် မှာ ခြေထောက် နဲ့ သာ စီယာ တိုင်ကို ထိန်းပြီး Bus ကား ကိုေ မာင်းနှင်နေ တဲ့ ကား ဆရာ(ရုပ်သံ)
Next post ကထိန်အလှူမှာ ကိုယ်တိုင်ဝ င်ရောက် လုပ် အားပေး ခဲ့ တဲ့ ပ ရိ သတ်အ ချစ်ေ တ်ာဟိန်းဝေယံ